Paramende Yovhurwa neChipiri?
Munyori wedare reparamende, kana kuti Clerk of Parliament, VaAustin Zvoma, vanoti vakasangana neChipiri nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vakaudzwa kuti naVaTsvangirai, kuti ivo VaTsvangirai vainge vawirirana nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti dare reHouse of Assembly, ritange kushanda nemusi weChipiri svondo rinouya, kuitira kuti pasarudzwe matuariri weparamende mutsva.
VaZvoma vati vachasanganawo naVaMugabe kuti vaone kuti nyaya iyi yofambiswa seyi. VaZvoma vatiwo vaimbova mutauriri wedare reparamende, VaLovemore Moyo, havasi kuzobvumidzwa kupinda muparamende kuti vavhote musi uchavhurwa paramende, nekuti havachisiri nhengo yedare iri.
VaMoyo vakabviswa pachigaro chemutauriri weparamende nedare repamusoro soro, iro rakapa mutongo wekuti vainge vasina kusarudzwa nenzira inotambirwa nemitemo yeparamende.
Asi gweta raVaMoyo, VaChris Mhike, vanoti vachiri kutaurirana naVaZvoma nezvenyaya iyi.
Zvichitevera kusajeka kwezvinhu pagakava riri muparamende, MDC inotungamirwa naVaTsvangirai, neChitatu yakaenda kudare reHigh Court ichitsvaga mutongo wekuti dare iri riise parutivi danho rakatorwa naVaZvoma, rekumisa dare reHouse of Assembly kuita basa raro kudzamara paitwa sarudzo yemutauriri wedare iri.